News - Aqoonta aasaasiga ah ee dhalista
Ma ogtahay waxa qaybaha mashiinka meerisyadu yihiin? Waxaa loo yaqaan "cuntada warshadaha farsamada" waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa qeybaha muhiimka ah ee mashiinada. Sababtoo ah qeybahan muhiimka ah waxay ka shaqeeyaan meel aan la arki karin, badanaa ma fahmaan kuwa aan xirfadlayaasha aheyn. Dad badan oo xirfadlayaal farsamo yaqaan ah ma garanayaan waxa loo yaqaan 'bearings'.
Waa maxay culeysku?
Hanuuninta waa qayb ka caawisa sheyga inuu meertado, oo loo yaqaan Japanese-ka oo loo yaqaan 'jikuke' Sida magaca ka muuqata, dhaliddu waa qaybta taageerta "usheeda dhexe" ee ku dhex wareegta mashiinka.
Mashiinnada adeegsada qalabka wax lagu dhejiyo waxaa ka mid ah gawaarida, diyaaradaha, matoorrada iyo wixii la mid ah. Baaritaannada waxaa sidoo kale loo adeegsadaa aaladaha guryaha sida qaboojiyaha, qalabka faakiyuumka iyo qaboojiyeyaasha.
Mashiinadan, jiingadu waxay ku taageeraan "usheeda dhexe" shaagagga, geerka, marawaxadaha, rotors iyo qaybo kale si ay uga caawiso inuu si habsami leh u wareego.
Maaddaama ay mashiinno kaladuwan isticmaalaan wax badan oo "wareeg" wareeg ah, sidaas darteed qaadashadu waxay noqotay qaybo muhiim ah, oo loo yaqaan "cuntada mashiinnada mashiinnada." Qaybtani waxay umuuqataa mid aan muhiim ahayn, laakiin waa muhiim. La'aanteed, waan awoodnaa ' kuma noolaado nolol caadi ah.
Iska yaree khilaafka oo ka dhig wareegga mid deggan
Waa inuu jiraa khilaaf u dhexeeya "usheeda dhexe" ee wareegaya iyo xubinta taageerada wareejinta. Dhalmada waxaa loo adeegsadaa inta u dhexeysa “usheeda dhexe” iyo qeybta taageerada wareega.
Dhalitaanku wuxuu yareyn karaa isku dhaca, wuxuu ka dhigi karaa wareegga mid xasiloon isla markaana yareyn kara isticmaalka tamarta. Tani waa shaqada ugu weyn ee dhalista.
Ku ilaali qaybaha taageerada wareejinta oo ku hayso "dhidibka" wareejinta booska saxda ah
Waxaa jira xoog weyn inta udhaxeysa “usheeda dhexe” iyo qeybta taageerada wareega. Joojintu waxay ka hortageysaa xubinta taakuleynta ee wareega in waxyeelo u geysto xooggan waxayna ku haysaa wareegga "usheeda dhexe" meesha saxda ah
Sababtoo ah shaqooyinkan xambaarsan awgeed ayaan dib u isticmaali karnaa mashiinkan muddo dheer.